Waa maxay Shuraakada Caafimaadka Afka Brown County?
Shuraakada Caafimaadka Afka ee Brown County (OHP) waa macaash-la’aan 501 (c) (3) oo loo hibeeyo hagaajinta marin u helka daryeelka ilkaha ee carruurta da'da iskuulka ku nool Brown County. Iyada oo loo marayo seddex rugo caafimaad oo go'an iyo barnaamijka ku saleysan dugsiga ee socdaalka, OHP waxay awood u leedahay inay siiso daryeel ilkeed in ka badan 9,500 carruur ah sanad walba. Shaqaalaha OHP ee dhakhaatiirta ilkaha ee tababaran iyo shatiyeysan, kalkaaliyeyaasha nadaafadda iyo kaaliyayaashuba waxay bixiyaan kahortag iyo dib u soo celinta tayada ugu sareysa bukaannada. OHP waxay qiimo aad u sareysa ku leedahay waxbarashada hore iyo ka hortagga, iyadoo bixineysa inka badan 11,000 sealant, 11,000 foloraydh varnishes iyo 5500 nooc oo ah tilmaamaha nadaafadda ee labada luqadood sanadkii la soo dhaafay.
Ayaa u qalma inuu noqdo bukaan?
Ilmo ilaa 19 jir ah waa inuu uqalmaa qado lacag la'aan ah ama qiimaheeda la dhimay dugsigiisa, waa inuu ka diiwaangashan yahay Mediaid, ama uusan heli karin bixiye ilkeed oo kale. Bukaanka looma diidi doono adeega sababta oo ah awood la'aanta inuu bixiyo, laakiin kuwa leh ceymiska gaarka ah waxaa loo gudbin doonaa takhtarka ilkaha ee gaarka loo leeyahay.
Sideen ugu diiwaangeliyaa ilmahayga?
Dugsiyo badan, OHP waxay u diri doontaa guriga taariikh taariikhda / foomka oggolaanshaha bilowga sanad dugsiyeed kasta. Hadaad jeceshahay in ilmahaagu lagu arko dugsigiisa, fadlan gebi ahaanba buuxi oo saxeex foomka oo ku soo celi dugsiga. Markii aan booqanno dugsiga ilmahaagu, waxaan ku dadaaleynaa dadaal kasta oo aan ku aragno cunuggaaga. Waxaan u soo diri doonnaa foomamka dheeraadka ah guriga ilmahaaga, faahfaahinta wixii aan ku qabanay iyo foomamka oggolaanshaha ee shaqada dheeriga ah, haddii loo baahdo. Hadaad jeceshahay inaad u raacdid ubadkaaga ballantiisa / ballanteeda ama aad jeceshahay in ilmahaagu lagu arko mid ka mid ah goobahayaga joogtada ah, fadlan naga soo wac (920) 965-0831 waxaanan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawinno qoritaanka ilmahaaga.
Fadlan xafiiskayaga soo wac (920) 965-0831. Waxaan ku faraxsanaan lahayn inaan ku caawinno!
Sidee baan u baajiyaa ama dib u dhigtaa ballan?
Fadlan wac xafiiskayaga (920) 965-0831 wixii ah baajinta / dib u dhigashada ballamaha. Fadlan la soco in aan u baahan nahay ogeysiis 24 saac ah wixii baajis ah ama dib u dhigis ah. Ka gaabinta u hogaansanaanta siyaasadan waxay sababi kartaa in laga ceyriyo barnaamijka.
Adeegyadee ayaa la siiyaa?
OHP waxay bixisaa adeegyo fara badan oo ka-hortag iyo dib-u-soo-celin ah, oo ay ku jiraan nadiifinno, imtixaanno, sawir-qaadyo, sealant, daaweyn foloraydh, buuxinno, koofiyad iyo in ka badan. OHP ma bixiso adeegyo takhasus leh, sida orthodontics, endodontics ama qalliin afka ah.
Sideen u bixiyaa adeegyada?
Caawimaadda caafimaad waxaa lagu dallaci doonaa adeegyada la bixiyo. Kuwa aan haysan gargaar caafimaad oo aan awoodin daryeel, qarashka waxaa ku dabooli kara lacagaha loogu deeqay. Ma jiraan wax lacag ah oo laga qaado waalidka / mas'uulka.
OHP hadda waxay leedahay saddex goobood oo rug caafimaad: Xarunta Kheyraadka Howe, Xarunta Ray & Joan Kroc Salvation Army Corps Community, iyo OHP West. Intaas waxaa sii dheer, waxaan u safreynaa dhammaan Dugsiyada Dadweynaha ee Aagga Green Bay oo si toos ah daryeel ugu bixiya dugsiyada. Fadlan eeg bogga Goobaha wixii macluumaad dheeraad ah.
Ilmahaygu wuxuu qabaa xaalad caafimaad. Weli ma la daaweyn karaa?
Haddii ilmahaagu leeyahay xaalad caafimaad, waxaad u baahan kartaa inaad la tasho takhtarkaaga si aad talo uga hesho. Qiyaas yar oo caruur ah oo qaba cudurka wadnaha ama xaalad wadne, nidaam kasta oo ilkeed ayaa laga yaabaa inay soo bandhigaan khatar. Waxaa looga baahan yahay, cunug kasta in la daweeyo, foomka taariikhda caafimaadku u buuxiyo si buuxda iyo gebi ahaanba waalidka / mas'uulka ballanta koowaad ama kahor ballanta koowaad.
Ilkaha ilmuhu runtii ma yihiin kuwo muhiim ah?
Ilkaha ilmaha (ama aasaasiga ah) waxay muhiim u yihiin sababo badan awgood! Ma aha oo kaliya inay ka caawiyaan carruurta inay si cad ugu hadlaan oo ay u calalaan si dabiici ah, waxay sidoo kale gacan ka gaystaan ​​samaynta jid ay ilkuhu joogtada u raacaan markay diyaar u yihiin inay qarxaan.
Goorma ayay tahay inuu ilmahaygu haysto ballankiisa koowaad ee ilkeed?
Cunugaaga waa in uu arko takhtarka ilkaha marka iligiisa koowaad uu burbuo ama aan ka dambeyn da'da hal sano.
Maxaan u isticmaalaa nadiifinta ilkaha canuggayga?
Buraash jilicsan oo caday jilicsan oo leh madax yar, gaar ahaan mid loogu talagalay khaas ahaan dhallaanka, waa in la isticmaalaa ugu yaraan hal mar maalintii waqtiga jiifka si looga saaro huurada. Haddii aadan haysan caday caday, maro qoyan ayaa sidoo kale lagu xoqi karaa ciridka iyo ilkaha.
Waa maxay sealant ilkuhu, yaase heli kara, intee ayeyse sii jirayaan?
Sealants waa xuub jilicsan oo balaastig ah oo lagu dhajiyay meelaha la calaacalayo ee ilkaha - badanaa ilkaha gadaashiisa (premolar iyo moolalka) - si looga hortago in ilkuhu xumaadaan. Rinjiga rinjiga ah ee dareeraha ah ayaa si dhakhso leh isugu xidha niyad jabka iyo digaaga ilkaha oo samaysanaya gaashaanka difaaca dhaldhalaalka iliga kasta. Caadi ahaan, carruurtu waa inay ku aasaan burushyadooda joogtada ah iyo miyir-qabka isla marka ay ilkuhu soo galaan. Qaabkan, ilkuhu sealantka ilkaha waxay ka ilaalin karaan ilkaha sanadaha u nugul da'da 6 ilaa 14. Si kastaba ha noqotee, dadka waaweyn oo aan suuxdin ama buuxin Moodooyinka dhexdooda ayaa sidoo kale ka faa'iidi kara sealant. Jirku wuxuu ka ilaalin karaa ilkaha inay ka xumaadaan illaa 10 sano, laakiin waxay u baahan yihiin in laga hubiyo jaangooyo ama gashan yihiin baaritaannada ilkaha caadiga ah.
Waxa jira waxyaabo badan oo ilkaha ilkaha ah oo laga kala dooran karo - midkee reerkaygu isticmaali karaa?
Hubso inaad doorato daawada cadayga ee ay ku jirto foloraydh, maaddaama ay jiraan waxyaabo dawada lagu cadaydo oo ay ku jirto foloraydh ay ka hortageyso daloolka. Xusuusnow inaad fiiriso calaamadda soo-saaraha - qaar ka mid ah waxyaabaha lagu cadaydo ee lagu taliyo carruurta ka yar da'da 6 maaddaama carruurta yaryar ay liqi karaan daawada ilkaha. Qulqulatida daawada cadayga ee ku badan foloraydh waxay horseedi kartaa in ilkuhu u soo baxaan marka dambe ilkuhu inay soo baxaan. Markii aad ka shakisan tahay, raadi shahaadada oggolaanshaha ADA. Shaabaddan macnaheedu waa in cadayga (ama shey kasta oo kale oo ah daryeelka caafimaadka afka) uu buuxiyey shuruudaha ADA ee amniga iyo waxtarka iyo sheegashada baakadaha / xayeysiinta si cilmiyeysan loo taageeray. Fadlan la soco in qaar ka mid ah soosaarayaashu ay doortaan inayan raadin ADA Seal of aqbalaadda. In kasta oo alaabooyinkan laga yaabo inay amaan yihiin oo wax ku ool yihiin, waxqabadka alaabadaani ma aysan qiimeynin mana aysan ansixin ADA. Dabcan, hubso inaad doorato daawada cadayga ee aad u maleynaysid inay dhadhan fiican tahay. Waxaa hadda jira dhadhanno badan oo la heli karo si looga caawiyo cunuggaaga inuu ku raaxeysto khibradiisa burush, laga bilaabo mint-ka caadiga ah ilaa xumbada xanjada ilaa qorfe.
Maxaan sameeyaa haddii cunuggaygu ilig leeyahay?
Ku maydh aagga dhaawacyada biyo milix diiran diiran oo meel kululee qabow si aad u yareeyso bararka una yareeysid xanuunka. Waxaad ku siin kartaa canuggaaga acetaminophen xanuun, laakiin ha ku shubin asbiriin si toos ah aagga ay dhibaatadu ka dhacday. Naga soo wac (920) 965-0831 sida ugu dhaqsaha badan si aad ballan uga sameysatid mid ka mid ah dhakhaatiirta ilkahaaga oo arka cunuggaaga.
Maxaan sameeyaa haddii ilmahaygu dhaco oo uu ilig soo baxo
Ilkaha ku hay taajka oo ku tirtiro asalka iligga biyo haddii ay wasakh tahay. Ha xoqin ama ha ka saarin wax kasta oo jajab ah oo unug ah. Haddii ay suurtagal tahay, si tartiib ah u geli oo ilig ku qabo godka. Hadeysan taasi suurta gal aheyn, ilig saar koobka caano oo dhaqtarka ilkaha u tag sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. Xusuusnow inaad ilkaha sidatid! Si aad u hesho macluumaad ku saabsan waxa la sameeyo inta lagu jiro xaaladaha degdegga ah ee ilkaha kale, booqo Websaydhka ADA.
Sideen ugu ilaaliyaa cunnugeyda cunno aamin ah ilkahooda / ilkaheeda?
Hubso in ilmahaagu helo cunto isku dheeli tiran. Xaddididda adeegidda sokorta (cuntada sida nacnaca iyo soodhada) waxay sidoo kale kaa caawin doontaa ilaalinta ilkaha cunuggaaga inuu ku xumaado. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa in la xaddido cabitaannada casiirka iyo cabitaannada kale sonkorta / aashitada ah waqtiyada cuntada oo keliya. Socodka iyo cabitaanka sharaabka ee koob ama dhalada waxay si weyn u kordhineysaa halista horumarinta godadka iyadoo la dheereeyo waqtiga waqtiga dhaldhalaalka ah ayaa la kulma walxaha sababa daloolka. Biyuhu waa cabitaanka ugu fiican ee ilkaha cunuggaaga!